Inyathelo le-Airbrush ngeNyathelo leMagazini elikhoyo kwiivenkile zeencwadi kumazwe asi-7 ukusuka ngo-2019
Inyathelo nge-Airbrush ngeNyathelo liphela leli iphephabhuku labo bonke abaculi bebrashi: ukusuka ekuqaleni ukuya phambili, ukusuka kumgangatho ophantsi webrashi yomoya ukuya kumakhi ongumzekelo, umzimba kunye nomtoliki wabathengi ukuya kumzobi oyingcali.
Inyathelo le-Airbrush ngeNyathelo lijolise kubo bonke abanomdla kwizihloko ze-airbrush ezisebenzayo kwaye bafuna ukuphucula izakhono zabo zokuhambisa umoya ngokusebenzisa iingcebiso zomsebenzisi ezisisiseko kunye nolwazi olusisiseko.
Inyathelo le-Airbrush ngeNyathelo linika imiyalelo yamanyathelo ngamanyathelo kwimifanekiso eyahlukeneyo. Inika ulwazi olusisiseko kunye neengcebiso zobungcali, iziveliso iimveliso zangoku kunye neendlela zangoku kunye neendaba kunye neengxelo ngesihloko sokuhambisa umoya kunye nomzekeliso.
Inyathelo ngebrashi ye-Airbrush ibandakanya uluhlu olubanzi, olusebenzayo nolunobuchule bokuqulatha: uthotho olusisiseko olufundisayo, ukwenziwa kweengxelo, udliwanondlebe lomculi kunye neephothifoliyo, ukuboniswa kwemveliso neemvavanyo kunye nomnyhadala wangoku kunye neengxelo ezisebenzayo zikumema ukuba ufunde, ukhangele, uphonononge kwaye qokelela incwadana.
Ukuqala ngomba omtsha 1 . Inyathelo le-Airbrush ngeNyathelo leMagazini belipapashwa kulwimi lwesiNgesi iminyaka eli-11. Ukuza kuthi ga ngoku, iikopi zithengisiwe kuphela kwiivenkile ezinikezela ngebrashi yomoya, ngokurhuma kunye nangomatshini we-intanethi.
Ngenxa yokuba usasazwe lwamazwe onke luya kulawulwa ukusuka e-UK, ixabiso lekopi kwikhusi liza kubonisa i-6,99 GBP. Ukupapasha nokuprinta kusenziwa “eJamani”. Iqela le-ASBS lizingca ngokuba le magazini iza kufumaneka eBarnes nakwiivenkile zeencwadi zaseNoble eMelika. Ixabiso lekopi yase-US liya kuba yi-12,99 USD.
Ngenxa yexesha leholide, ukuthunyelwa kwamanye amazwe kumaphepha kuya kuqalwa ngoJanuwari, ke kungathabathela kuFebruwari de iphephabhuku libe lifikile kwivenkile kumazwe akhankanyiweyo. Iinkcukacha ezithe kratya kwiivenkile ezithile kunye nakubathengisi ziya kufumaneka phakathi kuJanuwari.